Oba: The Last Samurai ( 2011 ) | MM Movie Store
Oba: The Last Samurai ( 2011 )
စဈကားကွိုကျတဲ့နှဈသူတှအေတှကျတျောတျောလေးကောငျးတဲ့ ဇာတျကားတကားနဲ့တငျဆကျလိုကျပါတယျဒုတိယကမ်ဘာစဈ ဂပြနျပိုငျ ဆိုကျပနျကြှနျးပျေါကအဆုံးသတျ စဈပှဲဖွဈပါတယျ…
အရှုံးဆိုတာ လှယျလှယျလကျမခံတတျတဲ့ ဂပြနျတို့ရဲ့ထုံးစံနဲ့ Emotion ပွငျးထနျတဲ့ Usa တပျရငျးမှူးတို့ကွားက အတ်တပွိုငျပှဲမှာ..ဂပြနျကပ်ပတိနျ က လကျနကျအလှယျလေး ခမြလား.?မိမိနိုငျငံပိုငျကြှနျးပျေါက ဂုဏျသိက်ခာအရ၂ ဖကျတိုကျနရေတဲ့ စဈပှဲကွား အပွဈမဲ့ဂပြနျပွညျသူတှရေဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျတှကေို့ဘယျလို ကာကှယျကုသရမလဲ..??
အနီးကပျ ကှပျကဲ့စောငျ့ကွညျ့ရတဲ့ Usa ကပ်ပတိနျအသဈရောကျလာတဲ့အခါမှကော့ ဘယျလိုအဖွေ ထှကျလာမလဲ.?စဈရဲ့ အနိဌာအာရုံတှကေို့ မကျြဝါးထငျထငျတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီးလယောဉျငယျဖွငျ့ ဗုံးခအြနိုငျယူ၍ ရပါသျောလညျးကညျြဆံထကျ နှဈဖကျခေါငျးဆောငျမြား စားပှဲဝိုငျးမှာအဖွရှောပွီး လူပေါငျးမွောကျမြားစှာရဲ့ အသကျတှကေို့မြိုးရိုးဂုဏျနိမျ့ပွီး
ဆာမူရိုငျးတို့ ဘယျလိုတုံပွနျမလဲဆိုတာကွညျ့ရူရမဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ….ကတြျောတို့ သငျယူရမဲ့ အခွခေံအခကျြတှေ့ ပိုလြှံနအေောငျညှနျးပွနိုငျတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတခုအဖွဈ ဖျေါညှနျးလိုကျပါတယျ
စစ်ကားကြိုက်တဲ့နှစ်သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတကားနဲ့တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဂျပန်ပိုင် ဆိုက်ပန်ကျွန်းပေါ်ကအဆုံးသတ် စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်…
အရှုံးဆိုတာ လွယ်လွယ်လက်မခံတတ်တဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ထုံးစံနဲ့ Emotion ပြင်းထန်တဲ့ Usa တပ်ရင်းမှူးတို့ကြားက အတ္တပြိုင်ပွဲမှာ..ဂျပန်ကပ္ပတိန် က လက်နက်အလွယ်လေး ချမလား.?မိမိနိုင်ငံပိုင်ကျွန်းပေါ်က ဂုဏ်သိက္ခာအရ၂ ဖက်တိုက်နေရတဲ့ စစ်ပွဲကြား အပြစ်မဲ့ဂျပန်ပြည်သူတွေ့ရဲ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေ့ကိုဘယ်လို ကာကွယ်ကုသရမလဲ..??
အနီးကပ် ကွပ်ကဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ Usa ကပ္ပတိန်အသစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှကော့ ဘယ်လိုအဖြေ ထွက်လာမလဲ.?စစ်ရဲ့ အနိဌာအာရုံတွေ့ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ငယ်ဖြင့် ဗုံးချအနိုင်ယူ၍ ရပါသော်လည်းကျည်ဆံထက် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ စားပွဲဝိုင်းမှာအဖြေရှာပြီး လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ အသက်တွေ့ကိုမျိုးရိုးဂုဏ်နိမ့်ပြီး
ဆာမူရိုင်းတို့ ဘယ်လိုတုံပြန်မလဲဆိုတာကြည့်ရူရမဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်….ကျတော်တို့ သင်ယူရမဲ့ အခြေခံအချက်တွေ့ ပိုလျှံနေအောင်ညွှန်းပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတခုအဖြစ် ဖေါ်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်